BBC'n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo Guyyoottan Muraasa Keessatti Akka Eegalu Beeksise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured BBC’n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo Guyyoottan Muraasa Keessatti Akka Eegalu Beeksise
BBC’n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo eegaluudhaaf qophii isa barbaachisu hunda xumuruu ifa godhe. Akka ibsa BBC’tti tamsaasni kuni kan eegalu guyyoottan muraasa keessatti. Kunis kan dhugoomu baatiin Fulbaanaa osoo hin xumuramin ta’uu isaatu himama. Fuulli Feesbuukii BBC Afaan Oromoo akkuma banameen hordoftoota kumaatama horachuu danda’eera.
Tamsaasani BBC Afaan Oromoo dhugoomuu jechuun guyyoottan muraasa booda Oromoon Afaan isaa BBC irraa dhaggeeffachuu fi odeeffannoo madaalawaa ta’e argachuuf eegala jechuudha. Kuni Oromoo fi afaan isatiif tankaarfii takka gara funduraatti.
Karoora BBC keessatti Afaan Amaaraa fi Tigrees ammatamaniiru. Ammas, karroorri BBC haarofni kan agarsiisu dhaabbanni Biriitaaniyaa kuni tamsaasa isaa gara Naayjeeriyaatti afaan sadiin (Igboo, Pidignii fi Yurubaan), akkasumas gara Hindiitti afaan afuriin (Gujaraati, Maraatii, Punjaabii fi Telguun) kan dabarsu ta’uu isaati. Tamsaasni Afaan Kooriyaas bara 2017 keessa akka jalqabu beekameera.
Oromoon hundi baga gammaddan!
bbc raadiyoo afaan oromoo
Previous articleOromoota daangaa Oromiyaaf kufaa jiraniif birmannaan bifa hundaa hatattamaan barbaachisa
Next articleMootummaan Oromiyaa koree deeggarsa lammii buqqa’eef godhamu qindeessitu dhaabe